हिरोइनलाई कुन मौसम मन पर्छ? | Home
हिरोइनलाई कुन मौसम मन पर्छ?
Posted on January 29, 2010 by Yonepal	छोटा लुगा लगाएर हिँड्न पाइने तथा आफ्नो सुन्दरता देखाउनमा कञ्जुस्याइँ गर्नुनपर्ने भएकाले जाडोभन्दा गर्मी मौसम मन पर्ने बताउँछन् अधिकांश नायिका । जाडोमा गुम्म लुगा लगाउनुपर्ने तथा सुटिङमा समेत चिसोले खुलेर काम गर्न नपाइने भएकाले जाडो मन नपर्ने बताउने नायिकाहरू गर्मी कहिले सुरु होला र फेसेनेबल भएर हिँडौला भन्ने ताकमा छन् ।
नायिका झरना थापा जाडो मौसम पटक्कै मन नपर्ने बताउँछिन् । ‘जाडोमा अनुहार पनि फुस्रो हुन्छ । धेरै केयर गर्नुपर्छ । काम गर्न पनि अल्छी लाग्छ । त्यसैले गर्मी कहिले आउला भन्ने भएको छ,’ जाडोको सास्तीबारे बताउँदै उनले भनिन्, ‘बसे उठ्न, उठे बस्न मन लाग्दैन । गर्मीमा त छरिता लुगा लगाउन पाइन्छ । जसका कारण काम गर्न पनि फुर्ती आउँछ ।’ जाडोमा सुटिङ गर्दा थुप्रैपटक बिरामी भएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘जीवनसाथी फिल्मको सुटिङ जाडोको वेला थियो । दिनभरि सुन्दरीजलको झरनामा भिजेर नाच्नुपर्ने । जाडोमा कठ्यांगि्रएर ज्वरो आयो । जसका कारण तीन-चार दिन बिरामी भएर सुतेँ । त्यहाँदेखि जाडोमा सुटिङ नभए हुन्थ्योजस्तो लाग्यो ।’ आफूलाई आइसक्रिम निकै मन पर्ने भएकाले पनि गर्मी मौसम मन पर्ने बताउँछिन् झरना । ‘गर्मीमा टन्न आइसक्रिम खान पाइन्छ । कोक, फेन्टाको चुस्की लिनुको आनन्द नै बेग्लै लाग्छ मलाई,’ झरनाले भनिन् ।
विराटनगरको गर्मीमा हुर्केकाले पनि आफूलाई गर्मी नै मन पर्ने बताउँछिन् अर्की नायिका रेखा थापा । ‘फेसनेबल भएर हिँड्न पाइन्छ । छिटो निद्रा खुल्छ । काम गर्न सहज हुन्छ,’ गर्मी मन पर्नुका कारण खोल्दै उनले भनिन्, ‘जाडोमा खुम्चिएर बस्नुपर्छ । अझ पानीमा भिज्ने, आउटडोर सुटिङ पर्‍यो भने त निकैै गाह्रो हुन्छ ।’ चिसोमा सुटिङ गर्दा थुप्रैपटक जाडोको सिकार भएको बताउँछिन् उनी । गर्मीमा पसिना धेरै आउने भए पनि आफूलाई छरितो महसुस गर्ने गरेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘गर्मी मौसमले मलाई निकै उमंगित बनाउँछ । गर्मी मौसम, ओपन डे्रस, जुनेली रात, घरको छत अनि चिसो-चिसो हावा । सम्भ”mदै मन भरंग भएर आउँछ ।’ कहिले गर्मी सुरु होला भन्ने प्रतीक्षामा भएको बताउने रेखाले आउँदो गर्मीका लागि विदेशबाट फेसनेबल डे्रस मगाएको बताइन् । भनिन्, ‘यसपटकको गर्मीमा बितेका वर्षमा भन्दा बबाल डे्रसअप गर्ने योजना बनाएकी छु ।’
गर्मीमा बिहानै निद्रा खुल्ने, जाँगर बढ्ने तथा पानीमा भिज्नुपर्ने सिन गर्न पनि सजिलो हुने भएकाले आफूलाई पनि गर्मी मौसम प्यारो लाग्ने बताउँछिन् नायिका सन्चिता लुइँटेल । ‘पातला खालका कपडा लगाउँदा आफूलाई सहज महसुस गर्छु । त्यसकारण पनि जाडोभन्दा गर्मीयाम नै मन पर्छ मलाई,’ गर्मीमा बढी पसिना आउने भएकाले शारीरिक रूपमा पनि स्वस्थ भइने टिप्स अथ्र्याउँदै उनले भनिन्, ‘चिसोमा ओठ फुट्ने, अनुहारको रङ नै फुस्रो हुने गर्दछ । जसले गर्दा धेरै केयर गर्नुपर्ने हुन्छ । गर्मीमा त्यस्तो समस्या हुँदैन ।’ उनलाई जाडोमा आउटडोर सुटिङ गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ रे । गत मंसिरमा पर्खी राख है फिल्मको सुटिङ दस दिनसम्म लगातार होलनाइट गर्दा चिसो लागेर बिरामी भएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘लगातार होलनाइट, त्यसमा पनि पानीमा भिज्नुपर्ने सिन । निकै सास्ती भयो । चिसो लागेर तीन-चार दिन बिरामी भएँ ।’
चिसोले आफूलाई झ्याप्पै समात्ने भएकाले गर्मीयाम नै मन पर्ने बताउँछिन् अर्की नायिका रेजिना उप्रेती पनि । अचानक फिल्मको सुटिङमा चिसो लागेर बिरामी भएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘चिसोमा खुलेर काम गर्न सकिन्न । जाडोले गर्दा जतिवेला पनि अल्छी लागिरहन्छ ।’ यसपालिको जाडोमा राज फिल्मको सुटिङमा व्यस्त भएकी रेजिनाले भनिन्, ‘हुस्सु, कुइरो लाग्ने भएकाले काममा पनि डिस्टर्ब हुन्छ । गर्मीमा मौसम खुलेको हुन्छ । वरपर हरियाली हुन्छ । जहाँ जान पनि सजिलो हुन्छ । कहिले गर्मी सुरु होला भन्ने लागेको छ ।’ रेजिनालाई गर्मीमा परेको पानीमा छाता ओढेर हिँड्न निकै मजा लाग्छ रे । भनिन्, ‘झमझम पानी परोस् । अनि छाता ओडेर हिँड्न पाइयोस् । छाताले ओड्दा पनि आधा शरीर भिजोस् । क्या मज्जा हुन्छ ।’ आफू चिसोप्रेमी भएकाले गर्मीमा आइसक्रिम तथा कोकको चुस्की लिँदै सट दिन असाध्यै रमाइलो लाग्ने बताउँछिन् उनी ।
जाडोमा हात धुन, पानी पिउन पनि गाह्रो लाग्ने तथा बाक्ला कपडा लगाएर हिँड्नुपर्ने भएकाले गर्मी मन पर्छ रे पूजना प्रधानलाई पनि । ‘छोटा-छोटा लुगा लगाएर सुटिङ गर्नुपर्ने सिनमा जाडोले काँडा उमार्छ । खुलेर काम गर्न सकिन्न ।’ जाडोेको बेफाइदा बताउँदै उनले भनिन्, ‘गर्मीमा जहाँ सुटिङ गर्दा पनि सजिलो हुन्छ । जाडोमा भने नगरकोट, धुलिखेल, पोखरातिर सुटिङ पर्‍यो भने निकै गाह्रो हुन्छ ।’ गर्मीमा नुहाउन तातो पानी नचाहिने भएकाले पनि उनलाई जाडोभन्दा गर्मी नै मन पर्छ रे । ‘गर्मीका मन परेका ओपन डे्रस लगाएर हिँड्न पाइन्छ,’ पूजनाले भनिन्, ‘जाडोमा चिसोबाट बच्न अनेक उपाय लगाउनुपर्छ । त्यसैले जाडो मन पर्दैन ।’
अर्की नायिका शोभिता सिम्खडालाई भने गर्मीमा जाडो अनि जाडोमा गर्मी मन पर्छ रे । ‘मलाई त गर्मीमा कहिले जाडो सुरु होला भन्ने लाग्छ । जाडोमा भने कहिले गर्मी होलाजस्तो लाग्छ,’ गर्मीमा ओपन डे्रसअप गरेर हिँड्न पाइने भए पनि खलखल आउने पसिना तथा घामको पोलाइले जाडोको प्रतीक्षा हुने गरेको बताउँछिन् उनी ।Naya Patrika
Filed under: Entertainment Tagged: | hot sexy	« सुन्तलीलाई ब्ल्याकमेल गर्थे धुर्मुस भियाग्रा र घाम उस्तै »
HalChal, on January 29, 2010 at 8:32 pm said:	K dami shovita ko wow